Korea ရုပ်သံ KBS ရဲ့ Winner ဆုကိုရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး – ရွှေအလင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်စရာအသံချိုချိုလေးနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ “အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုနားထောင်ဖူးကြမှာပါနော်..အဲဒီ သီချင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာသူကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကရင်မလေး နော်မာသထူးဝါးပါပဲ… သူလေးကတော့ ကိုရီးယားမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာ၊ ကရင်လူမျိုး လေးဖြစ်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့ အဆိုတော်လေးတစ်ယောက်ပါ…..
အဲဒီလို ထူးချွန်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသာမက ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်သံလိုင်း KBS ရဲ့ အစီအစဉ်မှာလည်း ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်…. သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခုပါနော်…
ကရင်မလေး နော်မာသထူးဝါးဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ MAMF ( Migrant’s Arirang Multicultural Festival) 2019 နိုင်ငံတကာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် final အဆင့်ကို ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်…
နော်မာသထူးဝါးက ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလည်း ပါဝင်ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်သွားဖို့ ရှိပါသေးတယ်…
အခုတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KBS ကတင်ဆက်တဲ့ KBS ကလေး အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တင်ဆက်ရင်း Winner ဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ….
“KBS ကလေးအစီစဉ် ဒီနေ့အတွက် ဒီဆုကိုအားလုံးအတွက်ပါရှင့်” ဆိုပြီးသူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှာ ပရိသတ်တွေ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူလို့ ရအောင် ဖော်ပြထားပါတယ်…
ကိုရီးယားလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတစ်ခုမှာ မိမိတတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ မြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာကသိအောင်ကြိုးစားပေးနေတဲ့ ကရင်မလေး နော်မာသထူးဝါး ကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြပါအုံးနော်..
Source : Naw Martha Htoowah
ပရိသတျကွီးရေ ခဈြစရာအသံခြိုခြိုလေးနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ “အိမျလေးတဈလုံးလိုခငျြတယျ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကိုနားထောငျဖူးကွမှာပါနျော..အဲဒီ သီခငျြးနဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိလာသူကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကရငျမလေး နျောမာသထူးဝါးပါပဲ… သူလေးကတော့ ကိုရီးယားမှာ နထေိုငျတဲ့ မွနျမာ၊ ကရငျလူမြိုး လေးဖွဈပွီးတော့ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ သီခငျြးဆိုကောငျးတဲ့ အဆိုတျောလေးတဈယောကျပါ…..
အဲဒီလို ထူးခြှနျတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသာမက ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီးရုပျသံလိုငျး KBS ရဲ့ အစီအစဉျမှာလညျး ပါဝငျလာပွီ ဖွဈပါတယျ…. သူ့ရဲ့ အောငျမွငျမှုက ကြှနျတျောတို့ မွနျမာတှအေတှကျ ဂုဏျယူစရာ တဈခုပါနျော…
ကရငျမလေး နျောမာသထူးဝါးဟာ ကိုရီးယားနိုငျငံမှာ ကငျြးပပွုလုပျနတေဲ့ MAMF ( Migrant’s Arirang Multicultural Festival) 2019 နိုငျငံတကာ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွုအဖွဈ final အဆငျ့ကို ပါဝငျခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ…
နျောမာသထူးဝါးက ကိုရီးယားနိုငျငံ ဘူဆနျ နိုငျငံတကာ ရုပျရှငျပှဲတျောမှာလညျး ပါဝငျဖြျောဖွေ တငျဆကျသှားဖို့ ရှိပါသေးတယျ…
အခုတော့ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး ရုပျသံလိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ KBS ကတငျဆကျတဲ့ KBS ကလေး အစီအစဉျမှာ ပါဝငျတငျဆကျရငျး Winner ဆုကွီးကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါပွီ….
“KBS ကလေးအစီစဉျ ဒီနအေ့တှကျ ဒီဆုကိုအားလုံးအတှကျပါရှငျ့” ဆိုပွီးသူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာမှာ ပရိသတျတှေ ဝမျးသာဂုဏျယူလို့ ရအောငျ ဖျောပွထားပါတယျ…
ကိုရီးယားလို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျပွီး နိုငျငံတဈခုမှာ မိမိတတျကြှမျးတဲ့ ပညာရပျတှနေဲ့ မွနျမာဆိုတာ ကမ်ဘာကသိအောငျကွိုးစားပေးနတေဲ့ ကရငျမလေး နျောမာသထူးဝါး ကို ပရိသတျကွီးတို့လညျး အားပေးစကားပွောကွားခဲ့ကွပါအုံးနျော..
သူများတွေအတွက် ကယ်ဖို့ပြင်ဆင်ချိန် အိမ်မှာရေကြီးနေလို့ အကူအညီပြန်တောင်းလိုက်တဲ့ ဝေဠုကျော်
ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို eng လို ပြေပြစ်စွာပြောတဲ့ ဦးနုရဲ့ video ဖိုင်..
အောင်မြင်နေပေမယ့် အကြော်သည်ဘဝကို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ ခံစားချက်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့...